Nezvedu - XuZhou Xinpaez Water Kucheneswa Equipment Co., Ltd.
Xinpaez: Nyanzvi pakurapwa kwemvura kubvira 2010 China Xinpaez yekuchenesa mvura michina Co, Ltd. inoyevedza mugadziri nyanzvi mukutsvagisa, kusimudzira, kugadzira uye kutengesa kwemisoro yekugeza, hosipi hosi, mafirita emvura, mafirita emvura, uye zvishongedzo zvekicheni. Iyo yakavambwa mugore re2010 ine yakanyoreswa capital yemamirioni 6 yuan (RMB). Pasi pekutungamira kwakakosha kweMutungamiriri wedu, 'Mr. WenLian Qiao ', isu takawana budiriro inoshamisa mune ino dura. Hutungamiri hwake hunotyisa, ruzivo rwakadzama uye kurudziro yenguva dzose zvakaita kuti tikwanise kuzvisimbisa sesangano rakavimbika renzvimbo iyi.
Parizvino tanga tichimhanya gumi ekugadzira mitsara. Isu tinopihwa simba nechikwata chinoshanda chevashandi.
Kambani yedu ine yakazvimirira QC (Hunhu Kudzora) timu, ivo vanozoita yenguva dzose uye zvisina kujairwa sampling kuongorora kuti ive nemhando yeiyo yekugadzira tambo, kubvisa chero vatengi 'zvinonetsa. Nyanzvi dzedu dzinoshandisa yazvino kuchengetedza mvura uye firita matekinoroji kune akanakisa hunhu hwemvura. Ivo vanoshanda vari tandem neumwe kune mumwe kubudirira kubudirira kwezvinangwa zvesangano.
Yedu yekutengesa uye sevhisi network inopararira pasirese nyika, nyika huru dzekunze dziri Germany, South Korea, Italy, India, Russia, Australia, Indonesia, nezvimwewo edu makuru emakambani ekubatana ndeaya: RongShiDa, ZhiGao, Angel, Midea, nezvimwe. kukosha kweiyo bhizinesi ndiko "Tarisa pane mhando kwete huwandu, gadzira nemoyo". Tinovimba kukuunzira basa rakagutsikana kuburikidza nebasa redu rakaoma. Unogona kufonera kambani yedu chero nguva kana iwe ukawana chero matambudziko panguva yekushandisa zvigadzirwa zvedu. Isu tichagadzirisa ese mushure mekutengesa matambudziko kuitira kuti iwe ugutsikane. Kuti uite kuti iwe utenge zviri nyore, Xuzhou Xinpaez anovimbisa zvinotevera: yepamusoro mhando, yakaderera mutengo, kukurumidza kuendesa, yakanakisa mushure-yekutengesa sevhisi.
KuXinpaez, tanga tiri mucherechedzo mukurapa kwemvura kuChina. Kwemakore, isu takawana yakawanda ruzivo mune ino dura. Isu tinovimba nechikwata chehunyanzvi chakazivikanwa. Zvisinei nezvaunoda, isu tinokwanisa kukuratidza mhinduro yakanakisa yekuwana mvura yakachena.
Isu tinongopa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Chinangwa chedu ndechekusangana nezvinodiwa nevatengi vedu. Tine michina yemhando yepamusoro, hunyanzvi hwehunyanzvi, fomula yesainzi uye yakasimba yekugadzira mhando yekutarisira Tichaziva zvaunoda munguva, uye tigoita ese marudzi ezvigadzirwa zvinoenderana nezvaunoda.
Nyanzvi dzakagadzwa nesu dzine ruzivo rwakadzama uye ruzivo rwekushanda mumasangano ekugadzirisa mvura. Nekuda kwebasa rakabudirira revashandi vedu, isu takakwanisa kumira pachedu pamberi pevakwikwidzi vedu. Pamusoro pezvo Tiri weGoridhe PLUS Mutengesi akasimbiswa neSGS. Mafirita edu emvura uye macartridge zvese zvine ROHS, REACH nezvimwe zvitupa.